Hiseho Sehatra, Hamaky Fefy Any Amin’ny Herinandron’ny Lamaody Any Lakme Ilay Nepaley Vavilahy Mpilatro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Febroary 2017 1:48 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Ελληνικά, 日本語, 繁體中文, English
Anjali Lama. Sary tao amin'ny Flickr avy amin'i Norad. CC BY-NC-ND
Nanoritra làlana mamirapiratra eo amin'ny sehatry ny lamaody i Anjali Lama. Izy no vavilahy mpilatro voalohany voafidy any Nepal ary hilatro amin'ny sehatra avon'ny Herinandron'ny Lamaody any Lakme, izay atao any Mumbai ny volana Febroary.
Nanoratra ny momba ilay vaovao tao amin'ny Facebook ny oliravin'i Nepal teo aloha Shristi Shrestha :
Fotoana ireharehantsika rehetra izao ! Anjali Lama, inoako fa fanombohana goavana ho anao eo amin'ny sehatry ny lamaody izao. Ny mba ho voafidy tamin'ireo tovovavy an-jatony dia tena fahombiazana lehibe, ary vitanao izany ! Ny làlana aloha dia tsy maintsy sarotra, nefa azoko antoka fa hitondra anao amin'ny ho avy tsara sy mamiratra izay mendrika anao tokoa io làlana io. Ry vavilahy voalohany mpilatronay ❤️ omenay anao ny fitiavana sy ny vintana avy aty Nepal ?
Lehilahy i Lama tamin'ny vao teraka ary nomena anarana hoe Navin Waiba ( vaovao no dikan'ny ‘Navin’ amin'ny fiteny Nepaley). Lehibe tany amin'ny faritra lavitry ny tontolon'ny lamaody mirentirenty sy maka fanahy tany ambanivohitr'i Nepal, distrikan'i Nuwako, tsy nanana eritreritra kely akory ny amin'izay atao hoe lamaody noho ny fiainana any ambanivohitra.
Nolazainy fa tsapany avy ao anatiny fa vehivavy izy, sady tia manao hosotrosotra amin'ny tarehy (makiazy) ary te-ho tsara tarehy hatry ny mbola kely. Izy tonga tao Kathmandu noho ny fianarana ambony no nifaneraseràny tamin'ny Blue Diamond Society, fikambanana miaro ny zon'ny vehivavy miray amin'ny vehivavy, ny pelaka, ny sady lahy no vavy ary ny vavilahy (LGBT), ka nahitany ny tena olona ao anatiny — 20-taona niandrasana.
Avy eo niditra tamin'ny filatroana izy, ary ankehitriny dia mizotra ho amin'ny fanaovana ny tantara.
Afaka manova ny lamaody, eny fa na dia ireo mafy fo aza hoy @anjalilama00
Arahabao i Anjali Lama – ilay vavilahy mpilatro voalohany hilatro eo amin'ny sehatry ny LFW-2017!
Tao amin'ny Facebook, noderain'i Rochelle Pinto ny tontolon'ny lamaody noho ny nandraisany an'i Lama :
Isa 10 ho an'ny fampidirana. Tsy araka ny niheverana azy, mbola mijanona ho sehatra azo antoka ny lamaody, manaiky am-pifaliana ny tsy ara-dalànan'izao tontolo izao, ireo mpikomy sy voahilika .
Tamin'ny 2007, navelan'ny Fitsarana Tampony tany Nepal hifidy ny ho lahy na ny ho vavy araka ny fahatsapany ny tenany ny olom-pirenena. Omen'ny komitim-pifidianana alàlana ireo mpifidy mba hilaza na lahy na vavy na misoratra amin'ny tsy lahy tsy vavy. Vao tsy ela akory izay dia namoaka pasipaoro manokana ho an'ny sokajy vavilahy ( soratana hoe ‘O’ ho an'ny ‘hafa’ ) ho an'i Monica Shahi, ilay LGBT mpikatroka, i Nepal.
Na dia eo aza izany fandrosoana be izany, dia mbola maso miahiahy foana no hijeren'ny fiarahamonina nepaley ireo mpikambana ao amin'ny LGBT. Tany amboalohany, ohatra, tsy notohanan'ny fianakaviany sy ny namany i Lama. Na izany aza, nisy vokany ny asa mafiny ary efa miha-manaiky azy hatrany hatrany ny olona amin'izao fotoana izao.
Nanoratra tao amin'ny pejy Facebook-ny i Lama :
Ho ahy, tsy ilaina ny mahalala hoe vavilahy aho na tsia. Resaka fahafahana miatrika ny fiovàna sy ny tsy maintsy hitondràna izany imasom-bahoaka no olana. Ho ahy, iray amin'ireo olana izay mafy indrindra tsy maintsy resena ny tahotra izany.
Fa amin'izao fotoana izao, malaza be ny filatroan'i Lama any amin'ny Herinandron'ny Lamaody any Lakme, indrindra fa amin'ny haino aman-jery indiana.
Nalaza be tao amin'ny haino aman-jery indiana i Anjali Lama, ilay vavilahy mpilatro izay nahazo toerana tamin'ny filatroana Nepaley.